Aka, ụkwụ na aka Ọrịa (HFMD) | Ngwọta OMG
Aka, Ụkwụ na Ọnụ Ọrịa (HFMD)
Aka, Ụkwụ na Ọnụ Ọrịa (HFMD) bụ ọrịa nje nke otu ìgwè nke enteroviruses kpatara ma bụrụ nke ọrịa Coxsackie na-emekarị.
Rash (mkpịsị elu ma ọ bụ ebe a zụlitere) ma ọ bụ ntakịrị mkpịsị aka n'ọbụ aka aka, ụkwụ ụkwụ, ma ọ bụ ọkpụkpụ.
Ọnụ ọnyá nke dị n'ime ọnụ ma ọ bụ n'akụkụ nke ire
Sohargy Ọnọdụ nke gbasara
Ọ na-esi ngwa ngwa na-agbasa site n'otu onye gaa na onye ọzọ site na mmiri droplet, mmiri na-abata site na ịbata na mmiri site na blisters. O nwekwara ike ịbụ na ọ ga-abụ ruo izu ole na ole mgbe ọ kpatara ọrịa ahụ.
Oge mmalite nke HFMD bụ 3 ka ụbọchị 5. Mgbaàmà na-amalitekarị 3 ruo ụbọchị 7 mgbe ị natara ọrịa ahụ. Mgbaàmà nwere ike ịdị n'etiti 7 gaa na 10 ụbọchị.
Nwatakịrị nke nwere ọrịa HFMD na-efe efe n'oge dum ọrịa. Ha kwụsịrị ịmị efe mgbe ọrịa ha kwụsị.
Obodo niile kwesịrị ịnọgide na-enwe ụkpụrụ dị elu maka ịdị ọcha onwe onye na gburugburu ebe obibi iji belata ohere nke nnyefe HFMD.
A na-enyocha ụmụ ahụike zuru oke kwa ụbọchị mgbe ha rutere n'ebe nlekọta ụmụaka. A ghaghị iwepụ ụmụaka nwere ihe mgbaàmà ọ bụla ma ọ bụ omume site na ụlọ nlekọta ụmụaka iji nwetakwuo nyocha. Nke a bụ ihe dị mkpa iji gbochie ụdị mgbasa ozi nke ọrịa ndị na-efe efe nye ụmụaka ndị ọzọ.
Ụmụaka nwere HFMD kwesịrị ịnọ n'ụlọ, pụọ n'ụlọ akwụkwọ, nlekọta ụmụaka, ụlọ ọrụ egwu egwu, ụlọ akwụkwọ ọta akara na ebe ọha na eze juru ebe niile ruo mgbe mmiri ahụ na-acha ọkụ. N'oge a, a ghaghị izere ụmụaka ndị ọzọ ruo mgbe nwa ahụ ga-alọghachi.
Ndị ọrụ abụọ na ụmụaka ga-asacha aka ha mgbe nile iji jide aka ha n'ọnọdụ dị ọcha.
Ndị na-edozi aka na ụmụaka kwesịrị ịgbaso usoro usoro aka a na-atụ aro ya iji belata ohere nke ọrịa na-agbasa n'ime ebe a
Jiri ncha mmiri na mmiri na-agba mmiri;
Na-agbanye aka n'ike ka a na-asa ha ma ọ dịkarịa ala 10 sekọnd;
Saa ebe nile, tinyere aka aka, nkwo aka, n'agbata mkpịsị aka na n'okpuru fingernails;
Richaa aka mgbe ị sachara;
Jiri aka na-eji otu akwa nhicha
Ndị ọrụ kwesịrị ịsa aka ha:
Mgbe ha na-abata n'etiti etiti ụtụtụ;
Tupu ha akwadebe ma ọ bụ jee nri;
Mgbe ha gbanwere akwụkwọ ọcha, hichapụ ma ọ bụ hichapụ nwa nwa;
Mgbe o jisịrị ọbara ma ọ bụ mmetụ ahụ dịka mmiri si n'imi, ọnụ na obi dị ka mmiri si dị n'ime ya;
Mgbe ha gara n'ụlọ mposi, ma ọ bụ nwatakịrị maọbụ ha onwe ha;
Mgbe ị na-ejide anu ulo, ebe ndị na-azụ anụ, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ;
Mgbe a na-eme ihe na-eme n'èzí (dika igwu egwu na ụmụaka na mpaghara egwuregwu);
Tupu inye ma ọ bụ itinye ọgwụ ma ọ bụ mmanu nye nwa ma ọ bụ onwe;
Tupu ịla n'ụlọ
Ụmụaka kwesịrị ịsa aka ha:
Mgbe ha rutere n'etiti;
Tupu ha eri ma ọ bụ ṅụọ;
Mgbe ha jiri ụlọ mposi rụọ;
Mgbe ha na nwatakịrị nwere ike na-arịa ọrịa, ha na-akpakọrịta;
Mgbe ha gbanwere akwụkwọ ozi ha;
Mgbe ị na-egwuri egwu n'ámá egwuregwu ahụ;
Ekerela ihe oriri, arịa, iko mmanya, nsí ezé ma ọ bụ akwa akwa na ụmụaka ndị ọzọ.
Mgbochi nke ọma nke isiokwu dịka ihe eji egwuri egwu, arịa nri na akwa akwa wetara site na droplet, mmiri, mmiri na-abaghị uru ma ọ bụ nke ndị ọrịa
Ihe eji egwuri egwu ma obu ngwa ndi ozo site na ntanetua ma obu ozo edere kwesiri idicha ya tutu emegharia ha.
Naanị ihe eji egwuri egwu nwere ike iji ya na ụmụaka nwere nkwarụ. A ghaghị inye ihe eji egwuri egwu iche maka otu nwatakịrị ọ bụla ka o wee ghara ịmekọrịta n'etiti otu. Nke a ga - egbochi ikpughe nke ndị mmadụ na - efe efe naanị otu otu n'oge ọrịa ọrịa.
E kwesịrị ịsacha ihe egwuregwu ụmụaka ma kpochapụkwa bọọlụ ụlọ n'oge niile.
Ihe eji egwuri egwu nwere ike ịda mbà n'obi, ya bụ, ihe eji egwuri egwu nke a na-agaghị edozi kwesịrị ka a ghara ikwe ka ya.
A ghaghị ịsacha ma kpochapụ ihe eji egwuri egwu nke nwatakịrị ga-eji na-edozi ahụ tupu ụmụaka ndị ọzọ emee ya.
Nzuzo 9744 5 Echiche Taa